Iimbono zesakhelo seMifanekiso ye-DIY- Iindlela ezi-7 zoBuchule zokugcwalisa isakhelo sefoto - Umboniso
Iimbono zesakhelo seMifanekiso ye-DIY- Iindlela ezi-7 zoBuchule zokugcwalisa isakhelo sefoto
Ivenkile eOliver Bonas U-Oliver bonas
Tshintshela eyakho udonga lwegalari ngokucinga ngaphaya kwefoto, uprinte okanye upeyinte kwaye wamkele ezinye iindlela zokuyila zokwenza indawo yakho kunye nokuguqula iindonga ze-bland . Nokuba kukwifayile yakho ye- igumbi yokuhlala , ipaseji , okanye ecaleni kwezitepsi, iindonga zegalari zisinika ithuba lokwenza ukuhonjiswa kwethu kubonisiwe. Ukuba uthanda ukunika umboniso wakho makeover encinci, yonke into oyifunayo zizakhelo ezintle zeefoto, ubuchule bokuyila, kunye nengcinga yakho.
Nazi iindlela ezisixhenxe zokugcwalisa isakhelo sefoto.
'Ukukhululeka esinokuthi siguqule ukubonisa kwethu udonga lwegalari kubonelela ngotshintsho lwexesha. Kwaye ngoku imbonakalo yomhlaba igcwele i-daffodils kwaye ndilibale-ngam, singamema intwasahlobo endlwini ngokongeza iintyatyambo ezomileyo kwizakhelo zethu zeefoto, utshilo uKayleigh Jordan, ingcali yezangaphakathi Iifoto zoBugcisa kunye noBugcisa .
Yazisa ngepateni, umbala kunye neemilo ngokukhetha iintyatyambo. Kutheni ungaqokeleli i-tulips, ii-crocuses, kunye neenyoka zentloko ye-fritillary kwindibano entle yeentyatyambo? Nantoni na oyikhethayo, iintyatyambo ezicinezelweyo ziya kulungela uhlaziyo lwasentwasahlobo / lwasehlotyeni.
Ngolu hlobo lomboniso okhethiweyo, khetha iifreyimu ezilula ngaphandle kokuhonjiswa, kumnyama okanye mhlophe, ucebisa uKayleigh.
UMila NaumovaImifanekiso kaGetty
Enye indlela efanelekileyo yokongeza umlinganiswa kudonga lwegalari kukuyila iimephu. Ukuphindaphindwa kwamazwe amandulo kunye neendawo ezilahlekileyo kumema umhlaba omtsha ekhayeni, ngelixa iimephu zanamhlanje zeendawo ezinqwenelekayo zivusa ukuzula.
Cinga ngeetshathi zeenqanawa kunye neemephu zaselwandle ezivulekileyo, ezisebenza kakuhle ngakumbi kwiindawo zeofisi, ngelixa iimephu zomhlaba zinokuhambelana nezinto zangaphakathi zale mihla. Umdibaniso weemephu ezinesuti zamagumbi afanelekileyo kunye namakhaya anemixholo eyahlukileyo yemibala kuba zihlala zingumntu omnye okanye zineetoni ezimbini, utshilo uKayleigh.
Iifowuni zezakhelo, izakhelo ezixinzezelekileyo kunye neemvakalelo zangaphambi kokusebenza zinokusebenza ngokukodwa kwimephu yeedonga ezinemephu.
Ukusuka kwiinkwenkwezi ze-iconic zokugubungela ushicilelo olunomda kunye nokufota okuthathekileyo okulifaneleyo ibhaso lonyaka, iimagazini zokwenza iimifanekiso ezintle-njengeefoto ezinokubangela ixesha, indawo kunye nenkumbulo. Umzekelo, ukuba ufuna igalari yeediliya Vogue ukugquma ungakhetha iziciko ngokusekwe kwisitayile esithile, ixesha, umyili, okanye imodeli, umzekelo.
Kwakhona, kuninzi okungaphezulu apha kwaye kuya kufuneka uyeke imagazini ekugxilwe kuyo, kwaye ke khetha iifreyimu ezicacileyo zokubonisa ezi.
Amanqaku kunye neeleta
Kutheni ungafaki amanqaku kunye neeleta ezivela kusapho, kubahlobo kunye nabantu obathandayo nabalahlekileyo? Oku kunokusebenza ngokuqaqambileyo kumagumbi ngaphesheya kwekhaya, kuxhomekeke kubume kunye nesimbo sencwadi kunye nombhali wayo.
Ukubonisa oku kwizakhelo kuthatha iileta ezivela kwimemori elityelweyo ukuya kwisikhumbuzo semihla ngemihla sokuba yintoni kwaye ngubani esimxabisayo. Kubandakanya iimvulophu zoqobo ziya kuba zombini ziba neemvakalelo kwaye zithandeke.
Olunye udonga lwegalari edlalwayo lunokubandakanya amanqaku eposi, ii-whimsical doodle kunye nokubhalwa kwe-napkin, kucetyiswa nguKayleigh. 'Ezi ndidi zemiboniso zibolekisa kumagumbi akhanyayo, adlalayo, utshilo.
UJamie GrillImifanekiso kaGetty
UChris HellierImifanekiso kaGetty
'Imibongo yinto endihlala ndiyincoma kwiindawo zokuhlala,' utshilo uKayleigh, ocebisa ukuba kusetyenziswe amaphepha aqokelelwe kwimibongo, kunokuba kuthengwe imibongo ngokohlobo lweeposta kunye neprints. Ukhetho lwam luboleka mna ukuba ndikhethe amaphepha avela kwiivenkile zikaShakespeare ngenxa yolwazi lwabo oluhle kunye nemfutshane, nefuthe lendalo.
Khetha izakhelo ezinesibindi, ezinesitayile ukubonisa la maphepha abuthathaka.
Uyayithanda le nto uyifundayo? Yonwabele Iphephancwadi i-House Beautiful zisiwe ngqo emnyango wakho inyanga nenyanga ngokuhanjiswa simahla kwe-UK. Thenga ngqo kumshicileli ngexabiso eliphantsi kwaye ungaze uphoswe ngumba!
UJohn Lewis usungule uphawu olutsha olunokufikeleleka, NGALO LONKE - nalu ukhetho lwethu oluphezulu
Ezona freyimu zintle zekhaya elinesitayile
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Kuphi ukuthenga umthi wePasika
Iintyatyambo ezomileyo: apho ungathenga khona kunye nendlela yokulungiselela
Kuphi ukuthenga isithsaba seValentine Iintyatyambo ezingezizo ezasezityeni: izitayile ezili-13 oza kuzithanda
Izibuko ezili-15 zokuba uthenge ngoku Indlela yokugcina amaKrisimesi amaqabunga amatsha ixesha elide
Uyenza njani isithsaba seKrisimesi
UJohn Lewis utyhila ubuqhetseba ngokuxhoma iibhabhu
Uyenza njani isakhelo somfanekiso weKhadi leKrisimesi
Iingcebiso ezi-7 zokugcina umfanekiso wakho wangaphakathi ugqibelele
Iingcamango ezi-5 ezintle zegadi ze-DIY zokuzama
Sneak ukhangele kwi-IKEA x Sonos entsha
Imibono emi-7 emihle yemibala yegumbi lokulala
I-chip kunye ne-joanna scandal
are chip kunye joanna mtshato
ukuxhoma igadi yangaphakathi yengca
imifanekiso yamakhitshi asefama